यिनै हुन् सन्तोषीको ह.त्या गर्ने २१ वर्षीय युवक, यस कारण गरे ह.त्या ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
June 24, 2021 AdminLeaveaComment on यिनै हुन् सन्तोषीको ह.त्या गर्ने २१ वर्षीय युवक, यस कारण गरे ह.त्या ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
प्रहरीले सन्तोषी सुब्बा ह.त्या प्रकरणमा एक युवकलाई प’क्राउ गरेको छ। प’क्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका २१ वर्षीय सुरेश तिमल्सिना रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार तिमल्सिनाले सुरुमा सन्तोषीलाई ब.ला.त्कार प्रयास गरेको तर सन्तोषीले प्रतिकार गरेपछि घाँटी थिचेर ह.त्या गरेको स्विकार गरेका छन् ।
ह.त्या गरेपछि अनुहार चिन्न नसकियाेस् भनेर महिलाको पहिचान लुकाउन सन्तोषीको अनुहार भरि ढुंगाले प्र.हार गरेकाे बयानमा युवकले स्वीकार गरेका छन् । गत मंगलबार काठमाडौंको दक्षिणकाली मन्दिर स्थित पार्किङ सँगैको शौचालयमा ह.त्या गरेर फालिएकाे अवस्थामा सन्ताेषीको श’व भेटिएकाे थियाे ।
सुरुमा श’वको पहिचान हुन नसकेपनि प्रहरीको अनुसन्धानपछि उनि विभिन्न पशुपक्षीको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल बनेकी सन्तोषी सुब्बा भएको पुष्टि बहेको थियो । आज पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले घ’टना विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
१८ बर्षकि सेजलाको कोठा भित्र पस्दा यौ*नजन्य सामान देखि ला.गु औ.षध सम्म भेटिए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)